सुर्खेतमा नाटक घर आवश्यकता छः गौतम
सुर्खेतलगायत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र कलाका लागि निकै महत्वपूर्ण र उद्गम थलोका रुपमा चिनिन्छि । यहाँबाट उत्पादन भएका कलाकारहरु व्यवसायिक बनेर राष्ट्रियस्तरमै ख्याति पनि कमाइरहेका छन् । कलाक्षेत्रभित्रकै एउटा सशक्त विधा हो नाटक ।
सुर्खेतलगायत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र कलाका लागि निकै महत्वपूर्ण र उद्गम थलोका रुपमा चिनिन्छि । यहाँबाट उत्पादन भएका कलाकारहरु व्यवसायिक बनेर राष्ट्रियस्तरमै ख्याति पनि कमाइरहेका छन् । कलाक्षेत्रभित्रकै एउटा सशक्त विधा हो नाटक । नाट्य क्षेत्रको व्यवसायिकताका लागि के गर्न जरुरी छ त ? जागरणकर्मी दीपेन्द्र ओलीले लामो समयदेखि कला र साहित्यमा क्रियाशिल, आरङ्ग नेपाल सुर्खेत र जननाट्य मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशभक्त गौतम (सागर) सँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको केहि अंश ।
गौतम जी, रङ्गमञ्चको विकासस्तरलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
हामीले पछिल्लो समय नाटकको गतिविधि गर्न लागेको करिव २३ बर्ष जती भयो । हामीले २०५० सालबाट शूरु गरेका हाँै । पछिल्लो समय हाम्रो अभाव भनेको रङ्गमञ्चको अभाव हो । तै पनि अरुको मुख ताक्नुभन्दा आफैले नियमिति रङ्गमञ्चलाई गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय काठमाडौमा काठको बार बनाएर पनि रङ्गमञ्चहरु चलिरहेका छन् । सुर्खेतमा पनि त्यो सम्भावना नरहने त हैन ।
त्यसका लागि के हुनुपर्छ र तपाईहरुले नै के गरिरहनुभा छ त ?
राज्यको तर्फबाट तथा सहयोगी हातहरु त आवश्यक नै पर्छ । जे जती खर्च हामीबाट जुट्छ । त्यहीलाई बनाएर हामी रङ्गमञ्चहरुलाई अगाडी बढाउँने जमर्कोमा छौँ । स्कुलहरुमा औपचारिक शिक्षा डाक्टर बन्नेलगायतका क्षेत्रहरुमा हात हाल्नुपर्छ भन्ने पुरानो मान्याता छ । त्यो भन्दा अलिक फरक कलाकारीता क्षेत्रमा पनि प्रगती गर्न सक्छ भन्ने र अन्य संघसंस्थाहरु जुन नेपाली कलाकारितालाई जोगाउँनुपर्छ भन्ने हुन्छन् ती संघसंस्थाहरुसँग मिलेर हामी अगाडी बढ्ने सकल्प गरेका छौँ । महिना दिन सम्म दुःख गरेर एक दिन रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने त्यसपछि महिनौँको दुःख त्यसै खेर जाने समस्या छ । त्यो हुनु नाट्य घरको स्थापना नहुनु हो । पहिले नाट्य घर बनोस् त्यसपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।
नाट्य क्षेत्र अथवा रङ्गमञ्चलाई आम समुदायले कुन रुपमा बुझेको पाउनुभाछ ?
मानिसहरु जिवन पैसाको लागी मात्र हो भन्ने र जागीर खानुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा मानिसको जीवन त्यो मात्र हैन ।
अव रंङ्गकर्मी र अन्य क्षेत्रबाट के भइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मान्नुहुन्छ ?
त्यसैले आफ्नो मौलिकता जोगाउँन पनि यसको आवश्यक छ । विकास र संस्कृती सँगसँगै जानुपर्छ । आफ्नो मौलिकता जोगाउँनको लागी सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ ।
09:30 AM	- 10:00 AM
Man bhitra ka kura
06:10 PM	- 07:00 PM